DEG DEG: Naadiga Jeenyo oo diiday inay ciyaarto koobka Jenaraal Daa’uud – Gool FM
DEG DEG: Naadiga Jeenyo oo diiday inay ciyaarto koobka Jenaraal Daa’uud
Byare September 18, 2017
(Muqdisho) 18 Sebt 2017. Kooxda LL.PP Jeenyo ayaa diiday inay ka qeyb gasho koobka Jeneraal Daa’uud oo Jimcihii furmay.
Maalinta berito ah ayaa lagu waday in Jeenyo ay kulankoodii ugu horreeyay ee tartankan garoonka jaamacadaha kula ciyaarto kooxda Banaadir balse kulankaa ayaan dhici doonin maadaama ay diideen inay ciyaaraan sida uu xaqiijiyay kabtankooda Ahmed Tahliil.
Jeenyo ayaa ku andacooneysa inaysanba heysan ciyaartoy u matasha tartanka maadaama ay ka tageen 9 ka mid ah safkeeda hore oo ay ka mid ahaayeen, Daandii, Mayma iyo Xasaasi, isla markaana xiriirka kubbada cagta uu soo rogay go’aan ah in ciyaartoyda cusub aysan Jernaraal Daa’uud u safan Karin kooxahooda.
Waxaa dhacay saxiixyo badan intii uu furnaa suuqa horyaalka Soomaaliya balse xiriirka ayaa sheegay in ciyaartoydaasi aysan kooxahooda cusub u ciyaari Karin Jernaraal Daa’uud oo ay sugan doonaan oo kaliya intuu ka furmayo horyaalka.
Ma ahan cudur ku kooban oo qura Jeenyo balse waxaa la qaba kooxaha kale oo dhan.
Waxaa xusid Mudan in LL.PP Jeenyo ay Bishii Maarso ka dhawaajisay inay gabi ahaan joojisay ka ciyaarista horyaalka Soomaaliya iyadoo ka cabaneysa in laga hiiliyo oo kol kasta laga eexdo.
Iyadoo aan wax talaabo ah laga qaadin ayay Jeenyo misane ka laabatay go’aankeedii isla markaana horey u sii wadatay ka ciyaarista horyaalka iminkana waxay ka dhawaajiyeen inaysan ciyaareyn Koobka Jeneraal Daa’uud.
Haddaba Su’aasha ayaa ah Jeenyo ma iyadaa ka talisa Horyaalka Soomaaliya???.
Halkan ka Aqriso Warbixin aan horey uga diyaariney Jeenyo iyo go’aanadeeda aan laga fiirsan:
Ka bogo sida ay kooxaha Yurub ugu kala sarreeyaan dhanka UEFA
TOOS u daawo: Ghana vs Nigeria - LIVE